प्रेसर कुकरमा फसेको बालिकाको टाउको डाक्टरले पनि नि’काल्न सकेनन्, पछि बा’ध्य भएर यसो गरियो ! (हेर्नुहोस् तस्बिर) - Nepali in Australia
October 17, 2020 autherLeaveaComment on प्रेसर कुकरमा फसेको बालिकाको टाउको डाक्टरले पनि नि’काल्न सकेनन्, पछि बा’ध्य भएर यसो गरियो ! (हेर्नुहोस् तस्बिर)
एजेन्सी। भारत गुजरात स्थित भावनगरमा एक बालिका घरमा खेल्दै थिइन्। घरमा भएको प्रेसर कुकरसँग खेल्दा-खेल्दै यस्तो भयो की उनले आफ्नो टाउको कुकरमा घुसाइन। घरमा उनका परिवारजनले बालिकाको टाउको कुकरबाट निकाल्न अनेक प्रयास गरे। उनीहरु लगाएका अनेक जुक्ति केहिले पनि कम गरेनन्।
जसपश्चात उनीहरु बालिकालाई अस्पताल लैजान बाध्य भए। त्यहाँ डाक्टरहरुले पनि कुकरबाट बालिकाको टाउको निकाले प्रयास गरे। तर, उनीहरु पनि सफल हुन सकेनन्।
कुकर काटेर निकाले पश्चात बालिकाको टाउकोमा हल्का चोट लागेको र टाउको सुन्निएको पाइएको डाक्टरहरुको भनाई छ। बालिका अहिले डाक्टरहरुको निगरानीमा छिन्।